Hagaha Bilowga: Waa maxay Web Hosting? Waa maxay domene? Farqiga udhaxeeya Magaca Domain iyo Martigeliyaha Websaydhka
Hosting Guides /
Si aad u yeesho degel, waxaad u baahan tahay saddex shay: magac domain, martigalin web, iyo degel horumaray. Laakiin waa maxay magac domene? Waa maxay martigelinta shabakadda? Miyaanay isku mid ahayn? Waa muhiim inaad si cad ugu kala aragti duwanaato wixii ka soo kordha ka hor intaadan u dhaqaaqin abuuro iyo martigeli boggaaga koowaad.
Tusaale shirkadaha martigaliya: InMotion Hosting, SiteGround, A2 Hosting.
0.0.1 Sidee ayey u Shaqaysaa Martigelinta Websaydhku?
0.0.2 Shabakada Martigalinta vs Xarunta Macluumaadka
0.1 Noocyada kala duwan ee Webhotell
0.1.1 Hosting wadaago
0.1.2 Hosting Server heegan ah
1 Magaca Magaca Sharaxa
1.1 Waa maxay Magaca-domene?
1.2 Miyaad ka iibsanaysaa isla shabakadda iyo martigelinta shabakadda isla shirkaddan?
1.2.1 Fikradda # 1: Waligaa ha diiwangalin aagaga muhiimka ah martigaliyahaaga webka
1.2.2 Muuqaalka # 2: Laakiin qof walbana kuma raacsana …
1.2.3 Maxaa dhacaya haddii aad mar hore iska diiwaan gelisay qaybtaada shirkadda martigelinta?
1.3 Shabakada Marti-gelinta iyo Magaca Magaca FAQ
1.3.1 Lese dheeraad ah
Sidee ayey u Shaqaysaa Martigelinta Websaydhku?
Ka feker sida guriga aad ku kaydiso dhamaan alaabtaada; laakiin halkii aad ku keydsan lahayd dharkaaga iyo alaabta guriga, waxaad kaydisaa faylasha dijitaalka ah (HTML, dukumeentiyada, sawirrada, fiidiyowga, iwm) ee martigeliyaha webka.
Inta badan ma aha, ereyga "webhotell" waxa loola jeedaa shirkadda kireeya kombiyuutarkooda / server-keeda si ay u kaydiso nettsted-kaaga oo ay bixiso internetka si ay dadka kale isticmaali karaan faylasha ku yaal boggaaga.
Sida caadiga ah, shirkad martigalineed oo webka ah waxay ka badan tahay oo kaliya kaydinta boggaaga. Waa kuwan qaar ka mid ah adeegyada lagu daray qiimaha iyo sifooyinka just filayo bixiyahaaga martigelinta:
Diiwaangelinta Domain – Sidas ayaad ka iibsan mapa maamuli mapa domain og martigalinta isla bixiyaha
Nettsted-dhejiye – Qalabka qaab-sameynta bogga-iyo-dhicidda si loo abuuro nettsted
E-post martigelinta – Inaad dirto oo aad hesho emayl [E-post ilaaliyo]
Qalabka aasaasiga ah (kumbuyuutar server) iyo softiweer (CMS, OS OS, iwm) taageero
Shabakada Martigalinta vs Xarunta Macluumaadka
Ereyga "web-hosting" badanaa wuxuu loola jeedaa server-yada martigelisa boggaaga ama shirkada martigelisa ee kireeya goobtan.
Xarunta xogta badanaa waxay tilmaamaysaa xaruntii loo adeegsan jiray inay u adeegsato serverka.
Xarun xogeed waxay noqon kartaa qol, guri, ama dhismo aad u ballaaran oo leh qalab aan awood lahayn ama tamar dabayl ah, xiriiro xog-is-weydaarsi la’aan ah, kontaroolo deegaanka – dvs. qaboojinta, xakamaynta dabka, iyo aaladaha amniga.
Tani waa server. Magaca tusaalahan: DELL 463-6080 Server. Waxay u muuqataa oo waxay u shaqeysaa sidii desktop-kaaga gurigaaga – wax yar ka weyn oo ka xoog badan.
Tani waa sida xarunta xogta ay ugu egtahay gudaha, asal ahaan waa qol qabow oo ay ka buuxaan kombiyuutaro waaweyn. Waxaan qabtay sawirkan intii aan booqanayay Xarunta xogta ee xarunteedu tahay 2016.
Noocyada kala duwan ee Webhotell
Waxaa jira afar nooc oo kala duwan oo marti-geliyaasha ah: Wadaag, Wareegga Gaarka ah ee Gaarka ah (VPS), Dedicated, iyo Cloud Hosting.
I kasta oo noocyada kala duwan ee server-yada ay you adegssayayaan xarun lagu keydiyo website-kaaga, waxay ku kala duwan yihiin qadarka kaydinta, xakamaynta, shuruudaha aqoonta farsamada, xawaaraha server, iyo kalsoonida. Vaxaan ku tusi doonaa khilaafaadka udhaxeeya VPS, wadaag, iyo dariiqa martigelinaya qaybta soo socota.
Dhiirigelin la wadaago, mid ka mid ah shabakadda internetka ayaa lagu meeleeyaa isla server badan oo ah goobo badan oo grønnkål, illaa dhowr illaa boqolaal ama kumanaan. Caadi ahaan, dhammaan meerayaasha waxaa just yaabaa inay wadaagaan baaxada guud en ilaha server, side RAM i CPU.
Sida kharashka aad u hooseeya, intooda badan bogagga intarnetka ah ee heerarka gaadiidka caadiga ah ee ku shaqeeya barnaamijka caadiga ah waxaa lagu martigeliyaa nooca noocaas ah. Martigelinta la wadaago waxaa sidoo grønnkål loo aqbalay side heerarka soo-galitaanka marti gelinta iyada oo loo baahan yahay aqoonta ugu yar ee farsamada.
Dhibaatooyinka – Lahaansho la’aan asaasiga ah, awood xadidan oo lagu xakameyn karo heerarka gaadiidka ama sarifka, waxqabadka goobta ayaa saameyn ku yeelan kara bogag kale oo isku mid ah.
Waa imisa qiimaha – Aan ka badneyn $ 10 marka la saxiixo.
Xagee laga helaa adeegyada martigelinta VPS: InMotion Hosting, Interserver, SiteGround
Hosting Server heegan ah
Nidaam gaar ah ayaa bixisa kantaroolka ugu sareeya ee server-ka webkaaga lagu kaydiyo – Waxaad si gaar ah u kireysataa dhammaan serverka. Boggaaga (r) waa bogga kaliya ee lagu kaydiyo serverka.
Dhibaatooyinka – Iyadoo awood weyn ay timaado … si fiican, kharash badan. Qodobbada loo yaqaan ‘Kunder’ vil si at du er i stand til å waxaa kaliya lagula talinayaa kuwa u baahan kantaroolka ugu sareeya iyo waxqabadka serverka.
Waa imisa qiimaha – $ 80 / mo iyo kor; qiimaha ku salaysan qiyaasaha adeegga iyo adeegyada dheeraadka ah.
Halkee laga heli karaa adeegyada martigelinta daruuraha: Badbaadada Digitalka, Hostgator, Daruuraha
Magaca Magaca Sharaxa
Waa maxay Magaca-domene?
Tani waa magac domene.
Et domene er nettstedets nettsted. Du kan også bruke internettilgang fra Samayn Karin bog, og du vil ha et domene for å gjøre det.
Si aad u heshid domainkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad diiwaangalinta domene adoo diiwaan-hayaha domain.
Magaca Domain ma aha wax jir ahaaneed oo aad taaban karto ama arki karto. Waa xaraf jilayaal ah oo ku siiya boggaaga aqoonsi (haa, magac, siden aadanaha iyo ganacsiyada). Tusaale ahaan magac-domene: Google.com, Alexa.com, Linux.org, eLearningEuropa.info, iyo sidoo grønn kale Yahoo.co.uk.
Dhamaan magacyada domain waa mid gaar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in ay jiri karto oo keliya halbeegyada shabakadaha caalamka. Ma diiwaangelin kartid magac marka ay diiwaangashadaan kuwa grønnkål (ay maamusho ICANN).
Talo: InMotion Hosting i GreenGeeks waxay siinayaan rukumo bilaash ah macaamiishooda markii ugu horeysay.
Miyaad ka iibsanaysaa isla shabakadda iyo martigelinta shabakadda isla shirkaddan?
Det er mulig å ha et domene i magataada iyo adeegyada martigelinta isla goob?
Fikradda # 1: Waligaa ha diiwangalin aagaga muhiimka ah martigaliyahaaga webka
Shakhsi ahaan, sida caadiga ah waxaan iska diiwaan galiyaa magacyadayda Magaca Kharashka oo ay marti galiyaan iyagoo bixiya adeeg bixiye kale oo kala duwan. Boggan waxaad akhrineysaa, tusaale ahaan, waxaa lagu martiqaaday InMotion Hosting.
Taasna waxay xaqiijineysaa in xayiraaddu ay ku jirto gacmahayga haddii ay dhacdo voks kasta oo aan u jihaynayo bixiyaha martigelinta.
Måten sahlan tahay inaad u guurto shirkad cusub oo marti gal ah markaad diiwaangeliso domainkaaga dhinac saddexaad. Haddii grønnkål, waxaad ku dabooshaa inaad sugto shirkaddaada martigalinta si aad u sii dayso domainkaaga. Tani waxay heli karta xeelad ah tan iyo markii ay sidoo kale ka luntay ganacsiga martigelinta.
Muuqaalka # 2: Laakiin qof walbana kuma raacsana …
Laakiin sug… taasi waa aniga aniga (waxaan ahay Diinsoor). Qaar badan oo ka mid ah maamuleyaasha websaydhada ayaa iibsada xarkooda isla markaana ku martigaliya isla isla hal meel. Waana wax caadi ah – gaar ahaan haddii aad ku nooshahay bixiye sumcad sumcad leh oo leh rikoor ganacsi oo wanaagsan. Waa tan ra’yi ka duwan oo lag soo xigtay Twitter:
@WebHostingJerry arkeen boostadaagii ugu dambaysay ee aad martigelisay. mahadsanid. qoraallo yar: namecheap dhab ahaantii waxay ku hayaan haya’daha martigalinta / magac domain ah, sidea darteed waxba ma dhicin inay saameyn ku yeelato martigelinta ama domainka ama kan kale. i dhab ahaantii ahaa maskax run ah (isku xiri)
@WebHostingJerry maalinta dib ugu noqo, laakiin taasi waa tan ilaa markaa isbeddelay. anaga oo ah magacyada loo yaqaan’checheap ‘ayaan si qoto dheer ugu qorney markii aan abuurnay shirkad marti-galin gooni ah, ku dhawaad, magacyadeena hoosta. måte kala duwan yihiin. pappa kala duwan. arag https://t.co/vNM0toRuIg
Maxaa dhacaya haddii aad mar hore iska diiwaan gelisay qaybtaada shirkadda martigelinta?
Waa hagaag aad leedahay laba ikhtiyaar.
Kaliya la noolow oo waxba ha qaban.
Ku wareeji magacaaga magacaaga diiwaan-galiyahaaga saddexaad.
Wixii # 2 – Halkan waa tilmaamaha tafaasiisha ah ee ku saabsan side for å lagre domenenavn Navn Billig. Oo halkan side aad u sameyn karto GoDaddy. Asal ahaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso
Hel Auth / Koodhka EPP oo ka socda diiwaangeliyahaaga hadda (kiiskan – shirkaddaada martigelinta)
Gudbi codsi beddelaad diiwaan-galiye cusub
Ogsoonow, side kudhaca Beddelka Nidaamka Diiwaangelinta ICANN, domener kayar maalmihii 60 maalmood ama la wareejiyay maalmihii ugu dambeeyay ee 60 lama wareejin karo. Waa inaad sugtaa ugu yaraan 60 maalmood kahor wareejinta.
Shabakada Marti-gelinta iyo Magaca Magaca FAQ
Waa maxay marti-geliyaha websaydhku?
Websaydhka websaydhku waa kombuyuutar dadku ku kaydiyaan degelkooda. Ka fikir inaad tahay guri aad ku kaydiso alaabtaada oo dhan; laakiin halkii aad dharkaaga iyo alaabtaada ku kaydsan lahayd, waxaad ku kaydsan karta faylasha kumbuyuutarka (HTML, dukumiintiyada, sawirrada, fiidiyaha, iwm.) websaydhka.
Sideen ku heli karaa qorshaha martigalinta ugu habboon?
Wakhtiga serverka, ikhtiyaarrada martigalinta martigelinta, qiimeynta, astaamaha gurmadka, guddiyada xakameynta, iyo saaxiibtinimada bey’ada ayaa ah astaamo muhiim ah oo tixgelin leh markaad dooraneyso martigeliyaha. Kahor intaadan dooran, waxaad marka hore fahmi doontaa baahiyaha boggaaga – waa kuwan su’aalaha aad isweydiinaysid hadaadan aqoon meesha aad ka bilaabi lahayd.
Waa kuwee adeegga martigelinta websaydhka ugu fiican?
Websaydh kastaa wuxuu caadiyan lahaan doonaa faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinka u gaarka ah marka la eego astaamaha, markaa waxaad u baahan tahay inaad doorato waxa ku habboon baahidaada. Si kastaba ha noqotee, qaar baa inta badan sameeya voks ka fiican kuwa grønnkål. Waxaan dhisnay nidaam kormeer oo loogu magac daray “HostScore” – waxay kuu oggolaaneysaa inaad eegto xawaaraha martigelinta websaydhka iyo isku halaynta, sidea darteed hubi inaad tixraacdo goobtaas ka horinartan.
GoDaddy ma marti gal baa?
GoDaddy waa adeeg bixiyaha shabakadda. Waxay bixisaa wax ka badan martigelinta websaydhada sidoo grønnkål waxaa ku jira adeegyada magaca domain, amniga websaydhka, martigelinta emaylka, codsiyada websaydhada, iyo inbadan.
WordPress-ka ma marti baahay webka?
WordPress waa Nidaamka Maareynta Maaddada. Waxaad kan hjelpe deg med marti-gelinta websaydh-ku-saleysan ee WordPress for å oppnå tilstrekkelig tilgang til marti-gelinta websaydhka.
Ma marti-gelin karaa degel internett ah?
Marka la soo gaabiyo – haa, waa suurtagal. Si kastaba ha noqotee, martigelinta websaydhkaaga si kalsooni leh waxay u baahan tahay maalgashi weyn oo xagga qalabka iyo kaabayaasha ah. Sida ugufiican uguna kalsoonida badan ee aad rabto in martigelintaada u noqoto, kharashka sare.
Immisa ayay ku kacaysaa in lagu marti galiyo degel?
Kharashaadka ku baxa martigalinta websaydhada waxaa ka mid ah websaydhka laftiisa, magaca domain, abuurista tusmada, naqshada garaafka, horumarinta shabakada, iyo suuq geynta. Si kastaba ha noqotee, martigelinta websaydhka lafteeda ayaa filaya inay bixiso inta u dhaxaysa $ 3 dårlig $ 10 bishii bishii oo ah marti-gelinta caadiga ah ee la wadaago. Marti gelinta VPS ayaa si aad ah qaali uga kici doonta.
Lese dheeraad ah
Haddii aad ku cusub tahay, waxaan daabacnay dhowr hagitaan waxtar leh iyo casharro kaa caawinaya inaad boggaaga ugu horreeya ku sameyso khadka tooska ah ee internetka.
Markaad abuurayso nettsted
Sida loo iibsado magac-domene (det vil si at diawaansanaha ama milkiilayaasha jira)
Sida loo abuuro boggaga kowaad (3 siyaabo sahlan)
Sida loo bilaabo barta isticmaalka WordPress
Intee ayey ku kacaysaa in la dhiso nettsted-ka
Markaad maareysid nettsted-kaaga
Sida loo guuri karo nettsted-kaaga martigeliye grønnkål
Sida loo beddelo HTTP ilaa HTTPS: Tilmaamaha A-to-Z ee SSL
Markaad dooranayso aqalkaaga internetka saxda ah
Dib-u-eegista websaydhka WHSR (miiska weyn ee weyn)
Isbarbar dhig adeega martigelinta adeegsiga adigoo isticmaalaya qalabkayaga lacag la’aan ah
Shirkadaha ugu fiican ee martigeliya ee loogu talagalay helitaanka miisaaniyadda
10-ka xul ee ugu wanaagsan ee marti gelinta webka ah sanadka 2020
Bixiyeyaasha ugu fiican ee marti-geliya ganacsiyada yaryar
Bixiyeyaasha martigelinta ugu fiican ee isticmaalayaasha WordPress
Bixiyeyaasha martigeliya ee ugu fiican ee aqbalaya bixinta PayPal
Bixinta: Xiriirrada xiriirka ayaa loo isticmaalaa qodobkaan. Haddii aad iibsato adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasheyda, waxaan sameyn karaa komishan.
Hagaha Bilowga: Web Hosting Waa maxay? Waa maxay Domain? Farqiga udhaxeeya Magaca Domain iyo Martigeliyaha Websaydhka
Hagaha Bilowga：Waa maxay Web Hosting？ Waa maxayドメイン？ Farqiga udhaxeeya Magaca Domain iyo Martigeliyaha Websaydhka
Hagaha Bilowga: Waa maxay webhosting? Waa maxay-domein? Farqiga udhaxeeya Magaca Domain iyo Martigeliyaha Websaydhka
Hagaha Bilowga: Hospedagem na Web? Waa maxay Domínio? Farqiga udhaxeeya Magaca Domain em Martigeliyaha Websaydhka
Hagaha Bilowga: Waa maxay webbhotell? Vänta max domän? Farqiga udhaxeeya Magaca Domain iyo Martigeliyaha Websaydhka